ကဗျာ | အောက်တိုဘာလ 2021
ခွေးအမိုးအကာ (၁၄) ခုံစကားပြောသော - ခွေးမမွေးမီသင်သိထားသင့်သည့်အရာ
ခွေးအမိုးအကာအတွက်ယခင်ကအလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီးခွေးမွေးစားခြင်းနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်စေတနာ့ဝန်ထမ်းအားလုံးသတိရသောဖြစ်ရပ်နှစ်ခုရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်ပြောနိုင်သည် - d
ငါတို့အားလုံးဟာခွေးရဲ့သီအိုရီကိုကြားဖူးတယ်၊ မင်းရဲ့ခွေးက ၆ နှစ်။ ဒါကြောင့်သူကလူသားတွေရဲ့ ၄၂ နှစ်ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီသီအိုရီကမှန်ပြီးဘယ်ကနေလာတာလဲ။ ဒီတော့
ခွေးခန္ဓာဗေဒ (ကြွက်သား၊ အင်္ဂါနှင့်အရိုးဆိုင်ရာပုံများ) အတွက် Visual Guide
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခွေးတွေစကားမပြောနိုင်ပေမဲ့ခွေးရဲ့ဘာသာစကားနားလည်မှုကိုနားလည်လာတဲ့အခါခက်ခဲဖို့မလိုပါဘူး။ သို့သော်ဖြစ်ကောင်း isn
သင့်ကိုငိုကြွေးမြည်တမ်းစေမည့် Dog Dog များ
သငျသညျကြောက်မက်ဘွယ်သောခွေး puns နှင့်အတူစာမျက်နှာတစ်ခုရှာနေလျှင်, သင်မှားသစ်ပင်တက်ဟောင်နေ! ခွေး puns ပုံစံအမျိုးမျိုးလာနိုင်ပါတယ်။ သူတို့က simp နိုင်ပါတယ်
ဓါတ်မတည့်သူများအတွက်အကောင်းဆုံး Hypoallergenic ခွေးများ
Atchoo! ချစ်စရာခွေးတစ်ကောင်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်သင်၏ဓာတ်မတည်ခြင်းကြောင့်နှာချေခြင်းအဆုံးသတ်ခြင်းထက် ပို၍ ဆိုးသောအရာမရှိပါ။ ဒါပေမယ့် hypoallergenic ခွေးဟာအိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်အတွက်အဖြေတစ်ခုပါ
Pomeranian အရောင်များ - အားလုံးအသိအမှတ်ပြုအင်္ကျီအရောင် ၁၃ ခုလုံး၏စာရင်းအပြည့်အစုံ
Pomeranians သူတို့ရဲ့သေးငယ်တဲ့အရွယ်အစားနှင့်ချစ်ဖွယ်ကောင်းသောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်အတူမြို့သူမြို့သားရဲ့အဘို့အပြီးပြည့်စုံသောအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့သွက်လက်တဲ့သဘာဝနဲ့ adorab ကြောင့်လူသိများကြသည်
ခွေးတစ်ကောင်ကိုအိမ်သို့ခေါ်လာခြင်းသည်အံ့သြစရာကောင်းပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသောအတွေ့အကြုံဖြစ်သည်။ ဒါ့အပြင်သူတို့ရဲ့လေ့ကျင့်ရေးကိုစတင်ရန်အကောင်းဆုံးအချိန်ပါပဲ။ ဤရွေ့ကားပထမ ဦး ဆုံးရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ် spec နှင့်ပြည့်စုံနေကြသည်
ခွေးကလေးအလေးချိန်တွက်ချက်နည်း - ငါ့ခွေးကလေးဘယ်လောက်ရနိုင်မလဲ။
ဒါဟာветеринар, နည်းပြများနှင့်မွေးမြူရေးမှအများဆုံးမေးသောမေးခွန်းများထဲကတစ်ခု ... 'ငါ့ခွေးကလေးဘယ်လောက်ကြီးမားရလိမ့်မည်နည်း!!' အချို့လူများကသင့်အားအရွယ်အစားအားကြည့်ရှုရန်ပြောလိမ့်မည်
Raised Dog Bowl Stand - DIY အဆင့်ဆင့်လမ်းညွှန်
ဒီခရစ်စမတ်ကို Fido ကိုခွေးပရိဘောဂတွေနဲ့ကုသတာကံမကောင်းအကြောင်းမလှပါဘူး။ သင်တစ် ဦး အပိုပြန်လည်အသုံးပြုသို့မဟုတ်ပြန်လည်သိမ်းဆည်းထားရှိပါကထို့နောက်သူကeနိုင်ပါတယ်
ခွေးတစ်ကောင်ကို ၀ ယ်ယူခြင်း (သို့မဟုတ်) ခွေးတစ်ကောင်ကိုမွေးစားခြင်းတို့သည်ကြီးမားသောဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းရွေးချယ်မှုနှင့်တူသည်။
ထိုကြည်ညိုဖွယ်ကောင်းသောအညိုရောင်မျက်လုံးများကသင့်အားခွေးအမိုးအကာတွင်သင်ရွေးချယ်သောကြောင့်သင်ကံကောင်းသည်။ သင်စာရွက်စာတမ်းများဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်သူမ၏အိမ်သို့ယူပါ။ သူမရဲ့ပုံစံများကသူမရောနှောဖြစ်ပါတယ်ဟုဆိုသည်
Poodles မှ Pugs အထိတစ်ခါတစ်ရံခွေးများသည် Wolf ကဲ့သို့မျိုးစိတ်များနှင့်သက်ဆိုင်သည်ကိုယုံကြည်ရန်ခက်ခဲနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့နားလည်ရန်အနည်းငယ် ပို၍ လွယ်ကူလာသည်
lab နှင့် pit ရောစပ်ထားသောခွေးကလေး